कोरियामा नेपाली अवैध बस्नुको कारण
बझाङ जिल्लाका बिक्रम भण्डारी कोरिया आएको ४ वर्ष ९ महिना भयो। अर्को महिना उनको भिसा सकिँदै छ। उनी घर जाने तयारी गर्दैछन्। तर उनी काम गरिरहेको कम्पनीले उनलाई तीन महिना अघिदेखि नै अवैधानिक बस्न कर गरिरहेको छ। अवैधानिक बसे तलब बढाइदिने लोभ पनि देखाइरहेको छ। ‘ज्यान जाला इलिगल त बस्दै बस्दिन,’ उनले आफ्नो ढिपी छाडेका छैनन्। कम्पनीको साहुले भनेको कुरा सम्झँदै उनी भन्छन्, ‘तेरो नेपालमा काम पाइँदैन, नेपाल गएर के गर्छस्? अझै एक दुई वर्ष बसेर अलि धेरै पैसा कमाएर घर जा।’
कम्पनीले तलब समेत बढाइदिने आश्वासनसाथ अवैधानिक बस्न कर गर्दा पनि अवैधानिक बस्दिन भन्ने भण्डारी अपवाद हुन्। कम्पनीले राख्छ भने अवैधानिक बस्ने नत्र कम्पनीबाट पाउनुपर्ने सुविधाहरु लिएर घर जाने भन्दै नक्कली टिकट समेत देखाएर अन्यत्रै गएर अवैधानिक काम गर्ने नेपालीहरु पनि नभएका होइनन्।
कोरियामा आएर भिसा अवधि सकिँदै गएपछि नेपाल गएर के गर्ने भन्ने विषयमा नेपालीको सबैभन्दा बढी चिन्ता पाइन्छ। कोरिया आएपछि अवैधानिक बस्नु नेपालीको रहरभन्दा पनि बाध्यता हुन सक्छ। तर एक दुई वर्ष अवैधानिक काम गरेर घर जाने सोचमा रहेका नेपालीको कथा लामो छ।
९ वर्षअघि मुनड्रप्स म्यानपावरमार्फत तीन वर्षका लागि कोरिया आएका धनगढी कैलालीका नवीन सिंह आफ्नो नौ वर्ष यहाँ बस्ने सोच कहिले नरहेको सुनाउँछन्। सुरुमा तीन वर्षको भिसामा आउँदा उनलाई लाग्थ्यो तीन वर्ष कहिले पूरा होला र घर जान पाइएला? तर अहिले यति लामो अवधि कोरिया बस्दा भोगेको पीडा पोख्दै उनी भन्छन्, ‘नेपालबाट आउनेबेला एक महिनापछि जन्मिने बेला भएकी छोरी अहिले ९ वर्षकै भई। छोरीलाई वाल्यकालमा दिनुपर्ने पितृस्नेह दिन सकिन। बिचमा बिदामा घर जाने सोच हुँदाहुँदै पनि जान सकिएन। अहिले घर जाने कुरा गर्दा कम्पनीको साहुले काम धेरै भएको कारण देखाउदै कहिले चार महिना, कहिले छ महिना अझै बस भन्दै कर गर्छ।’
कोरियामा नेपालीहरुले अवैधानिक काम गरेकोप्रति कोरिया सरकारको सम्बिन्धित निकायले दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदुत कमानसिंह लामासँग व्यक्त गरेको असन्तुष्टिमा राजदूत लामाले अवैधानिक बस्नुमा नेपालीभन्दा कोरियाको कम्पनीको बढी दोष रहेको बताएका थिए। दक्षिण कोरियामा रहेका क्रियाशील संघसंस्थाहरुका प्रतिनिधिसँग दूतावासमा भएको एक छलफलमा राजदूत लामाले ‘तपार्इंहरुको कम्पनीले नै इलिगल काम गराउँछ त उनीहरूले काम गरिहाल्छन् नि । कम्पनीले काम नदिओस् त कसरी इलिगल बस्छन्?’ भन्ने जवाफ दिएको बताएका थिए।
कोरियामा अवैधानिक रुपमा नेपालीहरु बस्नुको मुख्य उद्देश्य कोरियाको आकर्षक तलब नै रहेको एनआरएन कोरियाका अध्यक्ष विनोद कुँवर बताउँछन्। उनी भन्छन्– ‘यहाँ महिना मर्नेबित्तिकै एक लाख आउँछ, नेपाल गएपछि त्यत्रो पैसा कसरी कमाउने बरु अवैधानिक नै बसौं भन्ने सोच राख्छन्। त्यसमाथि नेपालको राजनीतिक अवस्था, देशमा बरोजगारीको समस्या आदिले नेपाल जानुभन्दा अवैधानिक बस्नु उचित हो भन्ने निष्कर्ष धेरैले निकालेको पाएको छु ।’
कोरियामा बेरोजगार कोरियन युवाहरुको संख्या बढ्दै गएको भएपनि विदेशी कामदारहरुको माग झनै बढ्दो छ। अवैधानिक भए तापनि काममा दक्ष कामदारलाई तत्काल प्रतिस्थापन गर्न सहज छैन। त्यसमाथि सरकारको फितलो नीतिका कारण कहिलेकाही गरिने अवैधानिक कामदारहरुको धरपकड ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ सरह भएको बताउँछन् माइग्रेन्ट ट्रेड युनियन(एमटियु)का अध्यक्ष उदय राई।
कोरियामा झन्डै १ लाख ८० देखि ८५ हजारसम्म अवैधानिक विदेशी कामदार छन् । सबै कामदारलाई स्वदेश फर्काउने हो भने कोरियामा रहेका कम्पनीमध्ये २० प्रतिशतलाई असर पुग्ने बताउँछन् एमटियु अध्यक्ष राई। ठूला कम्पनीले पनि अवैधानिक राख्ने गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘खोज्दै जाने हो भने सामसङजस्ता कम्पनीहरुले पनि अवैधानिक कामदार राखेको पाउन सकिन्छ। अवैधानिक कामदारहरुको सम्बन्धमा कोरिया सरकारले ‘सर्प पनि नमर्ने, लठ्ठी पनि नभाँचिने’ नीति लिएको बताउँछन् एमटियु अध्यक्ष राई।
कोरियाको श्रमबजार सम्बन्धी बैंक अफ कोरियाले गत बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कोरियन श्रमिकहरुको औसत उमेर हाल ४४ वर्ष पुगेको उल्लेख छ। सन् १९७० मा औसत ३५ वर्ष उमेर रहेकोमा सन् २०१३ सम्म ४४ वर्ष पुग्नुले श्रमबजारमा युवाहरुको संख्या घट्दै गइरहेको देखाउँछ। यसले गर्दा भविष्यमा कोरियामा श्रमिकहरुको माग अझै बढ्नेछ।
इपिएस (इम्प्लोयमेन्ट पर्मिट सिस्टम) मार्फत कामदार भित्र्याउने नीतिले मात्र कोरियामा श्रमिकहरुको माग धान्न पक्कै पनि सहज हुने छैन। त्यस अवस्थामा मजदुर संगठनहरुले उठाउँदै आएको अवैधानिक कामदारहरुलाई स्वत वैधानिक गर्नुपर्ने, वर्क पर्मिट सिस्टम लागू गर्नुपर्ने जस्ता मागहरु पुरा गर्नुको विकल्प कोरिया सरकारसँग हुने छैन।